शक्तिराज नेपाल::Leading News Portal From Kathmandu
वातावरण दिवसको अवसरमा साम्तेनका विद्यार्थीहरुले गरे वृक्षारोपन (भिडियो)
काठमाडौँ । बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्वर ११ संगको सहकार्यमा कपनमा रहेको साम्तेन मेमोरियल एजुकेशनल एकेडेमीका विद्यार्थीहरुले वृक्षारोपन गरेका छन् । बिहिबार विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा वडा नम्वर ११ को वडा कार्यलय परिसर र बंगलामुखी मन्दिर...
त्यतिखेर कसैसँग विभेदको विचार थिएन। सबैका मनमा उल्लास र आँखामा क्रान्तिको ज्वाला दन्किरहेको थियो। सबैका गफको विषय पनि एउटै हुन्थ्यो “आज केके भयो? अब केके गर्ने? कसले केके गर्ने? कहाँबाट सुरु गर्ने ?जस्ता भोलिपल्टका...
हाम्रो गणतन्त्रको व्यावहारिक शिक्षा
हामी सबैलाई चाकडी गर्न मन लाग्छ । आफूलाई बिर्सन्छौं।अरुलाई सम्झिरहन्छौं।हात मोल्छौं।चाकडी गर्न र पूजा गर्न पाए हामीलाई पुग्यो । आफ्नो उपलब्धि जेजस्तो भए नि पुग्यो।नम्बर भए पुग्यो । कथित विज्ञहरुको नजिक जान पाए पुग्यो...
साम्तेनमा ‘मातातीर्थ औंसी’ विशेष कार्यक्रम (भिडियो)
२० बैशाख, काठमाडौँ । बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्वर ११, कपनमा रहेको साम्तेन मेमोरियल एजुकेशनल एकेडेमीले मातातिर्थ औशीको अवसरमा ‘मातातिर्थ औशी उत्सव’ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । शुक्रबार स्कुलकै प्रांगणमा अध्ययरनत विद्यार्थीका आमाहरुको उपस्थितिमा मातातिर्थ औशी उत्सव...
हामी सबैका सामु एउटा सजीव उमङ्ग वा संवेग रहन्छ। सायद त्यो संवेग नै आमा हो।अनि हामी सबैका सामु अमिट खुसीको रेखा तरङ्गिन्छ। सायद त्यो खुसीको बहार नै आमा हो। आमा एउटा नवजात शिशुको जन्मदाता...
साम्तेनको ‘एसईई विदाई कार्यक्रम’ सम्पन्न (भिडियो)
बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्वर ११, कपनमा रहेको साम्तेन मेमोरियल एजुकेशनल एकेडेमीले ‘एसईई विदाई तथा उत्प्रेरणा कार्यक्रम’ सम्पन्न गरेको छ । चैत्र ६ गते कक्षा ९ का विद्यार्थीहरुले विदाई तथा उत्प्रेरणा कार्यक्रमको संयाजन गर्दै ‘एसईई विदाई...
२५ फागुन, काठमाडौँ । बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्वर ११, कपनमा रहेको साम्तेन मेमोरियल एजुकेशनल एकेडेमीले आइतबार (भोली) ‘बृहत विज्ञान तथा कला प्रदर्शनी’ गर्ने भएको छ । शुक्रबार स्कुलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै ‘बृहत विज्ञान तथा कला...